Chii chiri chichienderera musika: chii icho, mashandiro ayo, maawa uye makambani | Ehupfumi Zvemari
Mumusika wemasheya, nyika yega yega ine musika wayo wakaumbwa nemakambani emunyika. Pano, kuSpain, isu tine iyo inonzi misika inoenderera inosanganisira makambani zana eIberia. Asi chii chiri musika unoramba uripo? Chinoshanda sei? Muchiitiko chekuti iwe urikupinda munyika yehupfumi uye zvemari, iyi ipfungwa yakakosha kwauri.
Kwete chete isu tichapindura mubvunzo mukuru uyo ​​unopa chinyorwa ichi zita rayo, asi isu zvakare ticha tsanangura mashandiro anoita musika unoramba uchishanda, ndeapi maawa ekutengesa ari uye kuti makambani anoigadzira sei.
1 Ndeupi musika unoenderera uye unoshanda sei?
1.2 Musika unoramba uchivhurwa riini?
2 Ndeapi makambani anoumba inoenderera musika?
Ndeupi musika unoenderera uye unoshanda sei?
Kana iwe urikutanga kuisa mari mumusika wemasheya, kana zvirinani kuti uzvizivise iwe pachako nezvenyaya iyi, inguva yekuti iwe uwane kuti chii chiri kuramba chiri musika. Iyo sisitimu inobatanidza mana emasheya ekuSpain mumusika mumwe chete wemusika. Neiyi nzira, iwo masheya anogona kunyorwa panguva imwe chete paBarcelona, ​​Bilbao, Madrid neValencia stock exchange. Kugonesa ichi chiitwa, pane epuratifomu yemagetsi inonzi Spanish Stock Market Interconnection System (SIBE). Iyi chikuva inobvumidza ina yeSpanish stock stock exchange kuti iite sekunge yaive imwechete sitoko musika. Uye zvakare, inobatanidza iyo inogona kuita garandi nhaurirano, ETFs, masheya uye zvimwe zvigadzirwa zvekudyara.
Yakanga iri muna 1989 apo Spain yakatanga kutengesa masheya kuburikidza nemagetsi system. Panguva iyoyo, musika unoramba uripo wakabuda nemutengo wemasheya manomwe, hapana chimwezve. Nhasi pane anopfuura makambani zana nemakumi matatu akanyorwa pazviri. Mukati mayo, zvakare kune kuchengetedzeka kwakanyorwa pane IBEX 35, inova iyo index iyo inosanganisa pamwe makambani ane yakakwira musika capitalization.
Uyo anotarisira kutarisira musika unoramba uripo ndeye CNMV (National Securities Market Commission). Panzvimbo iyoyo, iro rinotonga ndiro BME (Spanish Stock Exchanges uye Misika). Kana chiri chebhizimusi rinotarisira kubvisa uye kugadzirisa, iyi Iberclear, iri muridzi weBME.
Izvozvi zvatave kuziva zvakanyanya kana zvishoma kuti chii chiri kuenderera musika chii, ngatitsanangure kuti zvinoshanda sei. Sezvatakambotaura kare, iyo SIBE inoumbwa nenzvimbo dzakasiyana siyana. Mazhinji eaya chikamu chevazhinji kubatira. Izvi, zvakare, zvinoenderana nemusika unoramba uripo unofambiswa nemhando dzakasiyana. Izvi zvinorevei? Zvakanaka chii mutengo unoumbwa kubva pamuchinjikwa pakati pezvinotengwa uye zvinopihwa zvekutengesa. Nezve maawa ekutengesa, isu tichazotaura nezvazvo gare gare.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti isu tinogona kuwana akati wandei zvikamu mukati meSIBE. Tichataura pamusoro pavo pazasi:
General stock kutengesa chikamu: Iyi ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye zvakare inonyanya kushandiswa nevatengesi vevatengesi muSpain.
MAB (Imwe Hositi Soko): Uyu musika wakagadzirwa muna2008 kuitira kuti makambani ane misika yemari yakaderedzwa kana iyo yaive muchikamu chekuwedzera inogonawo kunyorwa.
Latibex: Musika weLatibex wakapihwa mvumo muna 1999. Chinangwa chayo ndechekushandisa senzvimbo yekugadzirisa nekutaurirana muEurope yezvivakwa zvemakambani makuru muLatin America. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti izvi zvakatengwa mumaeuro.
ETF Musika: ETFs dzinogona kubvumidzwa muchikamu chino chiri cheSpanish stock stock. Aya mazwi anotsanangudza anotsanangudza akanyorwa mari yekudyara.
Kugadzirisa chidimbu: Chekupedzisira, pane iyo Kugadzirisa chikamu. Izvi zvinoitirwa avo vachengetedzo vane kudhara kuri pasi mukati meSIBE.
Musika unoramba uchivhurwa riini?
Kunze kwekuziva kuti chii chiri kuramba chiri musika, zvakakosha kuti tizive marongero ayo kana tichida kuenda kuruzhinji. Maawa ekutengesa emusika wekuSpain uyu anotanga naXNUMX mangwanani uye opera naXNUMX: XNUMX masikati. Nekudaro, isu tinofanirwa kufunga nezvesection yekuvhura neyekuvhara. Iyo nguva iri pakati pemakesi maviri aya inonzi "yakavhurika musika".
Asi chii chiri maokisheni? Iyi inguva yenguva yekutengesa pamusika wemusika. Munguva idzi nguva, odha dzinogona kuchinjwa, kukanzurwa uye kupinda, asi pasina zviito izvi zvichiitwa. Ivo anonyanya kushandiswa kuseta zvese kuvhura nekuvhara mitengo uye nekudaro kudzora kuwandisa kwemitengo.
Ngatipfupikisei uye zvirinani kufungidzira iwo marongero:
Kuvhura okisheni: kubva 8.30 am kusvika 9.00 am.
Vhura musika: kubva 9.00 am kusvika 17.30 am.
Kuvhara auction: kubva 17.30 am kusvika 17.35 am.
Ndeapi makambani anoumba inoenderera musika?
Kuziva chaizvo izvo zvinoramba zvichiitika musika, hazvina kukwana kuti uzive tsananguro kana marongero. Tinofanira zvakare kuziva kuti ndeapi makambani anoigadzira. Sezvatatotaura pamusoro apa, pane zana pamwe chete, vamwe vacho vane mukurumbira. Tichavanyorera pazasi:
Inm. kubva kumaodzanyemba
Mari inowanikwa 4
Kuti ukwanise kudzidza makambani nezvakakosha kana hunyanzvi, izvi zvinowanikwa kubva kwakasiyana masosi. Kune zviitiko zvakakosha, nzvimbo yekutanga yekuenda iri pawebhusaiti yeCNMV. Kune mamwezve akakwana kwazvo akadai seInvesting, Pcbolsa, infobolsa, nezvimwe. Zvisinei, yeuka izvozvo Chidzidzo chakanaka chekutanga chemusika uye makambani achakubatsira iwe kuita sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndeupi musika unopfuurira